Midowga Musharixiinta oo ka jawaabay go’aankii dowladda Soomaaliya | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Midowga Musharixiinta oo ka jawaabay go’aankii dowladda Soomaaliya
Midowga Musharixiinta oo ka jawaabay go’aankii dowladda Soomaaliya
Xilli Wasaaradda Amniga Soomaaliya ay shalay shaacisay in marnaba aysan ogoleyn in la qabto dibadbax laans ameeyo isu-imaatin aya Xubnaha Midowga Musharixiinta waxaa ay ku adkeysanayaan in ay qabanayaan banaanbaxa ay iclaamiyen.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo kamid ah Midowga Musharixiinta kana jawaabayay hadalkii Wasiirka Amniga Soomaaliya ayaa sheegay in go’aankoodii banaanbaxa uu weli siidii yahay, isla markaana banaanbaxa ay qabanayaan.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo la hadlay Idaacadda BBC-da waxaa uu sheegay in qodob Dastuuri ah uu yahay in la qaban karo banaanbaxa, isla markaana Maalinta Jimcaha ah ay ku qaban doonaan Taalada Daljirka Daahsoon banaanbaxa.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in shalay Magaalada Beledweyne lagu qabtay banaanbax lagu taageerayay dowladda, hayeeshee musharixiinta aysan aqbalen in banaanbaxdooda la diido mid dowladda lagu taageerayana la qabto.
Marka laga soo tago warkaan kasoo baxay Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo kamid ah Midowga Musharixiinta ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ay musharixiinta si rasmi ah uga hadlaan mowqifkooda Go’aankii dowladda ku mamnuucday banaanbaxyada.
Maqaal horeGo’aano & digniino laga soo saaray Amniga Magaalada Dhuusamareeb
Maqaal XigaPuntland oo ku goodisay inay baacsa doonto dadka ka faafiya been abuurka